एक लाख ८० हजार बजेटले ६०० घरमा पुग्यो अकबरे खुर्सानी खेती « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०७८, बिहीबार १७:२६
फिदिम, १४ असोज ।
सिमित बजेटले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका वडा नं. ६ ले । उक्त वडामा गत आर्थिक वर्षमा करेसाबारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ब्यवसायिक अकबरे खुर्सानी खेतीका लागि छुट्ट्याइएको रु. एक लाख ८० हजार बजेटले वडाका सबै घरमा अकबरे खुर्सानीको खेती सुरु भएको छ ।
उक्त बजेटबाट वडा कार्यालयले अकबरे खुर्सानीको विउ खरिद गरी बेर्ना उमारेको थियो । वडा कार्यालयले स्थानीय समूहहरु मार्फत खुर्सानीका विरुवा प्रतिघर ११६ वटाका दरले वितरण गरेपछि वडाका अधिकांश घरमा अकबरे खुर्सानीको खेती थालिएको हो । “वडाका करीब ६०० घरमा अकबरे खुर्सानीका विरुवा वितरण गरेका थियौँ”, याङवरक–६ का वडा सदस्य यामकुमार काम्बाङले भन्नुभयो, “अहिले सबै घरमा खुर्सानी खेती थालिएको छ । कृषकहरुले उत्साहित भएर खेती गर्न थाल्नुभएको छ ।” अहिले यो वडाका अधिकांश परिवारले घर आसपासमा अकबरे खुर्सानीको खेती लगाएको देख्न सकिन्छ ।
सरकारी निकायबाटै खुर्सानीका विरुवा पाएपछि कृषकहरु स्वयंले पनि खुर्सानी खेतीमा लगानी गर्न थालेका छन् । “वडाले अकबरेका विरुवा दिएपछि आफैँले पनि लगानी गरेर खुर्सानी खेती बढाएका छौँ”, स्थानीय कृषक रामकुमार गुरागाईंले भन्नुभयो, “यसरी सबैले खेती थालेपनि भाउ पनि राम्रै आउला भन्ने आश छ ।”
यहाँका अधिकांश कृषकहरुले गोलभेँडा खेती गर्ने गरेका छन् । तर गोलभेँडाले राम्रो मूल्य पाउन छाडेपछि कृषकहरु खुर्सानीतर्फ आकर्षित भएका छन्, जसमा याङवरक गाउँपालिकाको ब्यवसायिक करेसाबारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सहयोगीसिद्ध भएको छ । “सबै कृषकहरुले यसै वर्षबाट उत्साहपूर्वक खेती लगाउनुभएको छ”, वडा सदस्य काम्बाङले भन्नुभयो, “मूल्य कस्तो आउँछ भन्ने ठूलो जिज्ञासामा छौँ ।”
माटो सुहाउँदो नयाँ बालीको खोजीका क्रममा कृषकहरुले खुर्सानी खेतीमा भविश्य देख्न थालेका हुन् । तीन रोपनी खेतमा अकबरे र ठाडे खुर्सानीको बाली लगाएका याङवरक–६ पुरीगाउँका पुष्पलाल पुरीले खुर्सानीबाट यस वर्ष रु. ५० हजार आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । “टमाटरले भाउ नपाउने, समयमा बजार नपु¥याए कुहिएरै जाने । बरु त्यो भन्दा खुर्सानी सहज होला कि भनेर खेती बढाउँदै लगेको हुँ”, पुरीले भन्नुभयो, “वडाले सहयोग गरेपछि म जस्तै अरु पनि खुर्सानी खेतीतर्फ लाग्नुभएको छ ।”
पाँचथरमा विशेषतः फाल्गुनन्द गाउँपालिका–४ चिलिङदिनमा अकबरे खुर्सानीको अत्यधिक खेती हुने गरेको छ । यस बाहेक जिल्लाका अधिकांश वडाहरुमा समेत छिटफूट रुपमा अकबरेको खेती हुँदै आएकामा पछिल्लो समय उक्त खेतीले ब्यवसायिक रुप लिन थालेका हो । अकबरे खुर्सानीको स्वाद राखेर चाउचाउ लगायत खाद्य पदार्थ उत्पादन हुन थालेपछि यसको मूल्य समेत राम्रो हुने गरेको छ ।
याङवरक–६ गणेशचोकमा जग्गा भाडामा लिई छ रोपनी जमिनमा अकबरे खुर्सानी लगाउनुभएका स्थानीयवासी वीरेन्द्र काफ्लेले भन्नुभयो, “सुरक्षित बजार र आकर्षक मूल्यले अकबरेको खेतीतर्फ आकर्षित गरिररहेको छ । यसको ब्यवसायिक उत्पादन र बजारिकरणमा सरकारी सहयोग अत्यावाश्यक छ ।” याङवरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङले ब्यवसायिक करेसाबारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सफल भए यसमा गाउँपालिकाले थप लगानी गर्दै जाने सोच बनाएको वताउनुभयो ।